यसरी बनाऔं नवलपुरको नमुना सदरमुकाम
शुक्रवार, आश्विन १, २०७८ ०६:०८:५७ युनिकोड
बुधवार, असार १६, २०७८ सत्यकलम संवाददाता
लेखक : अमृत कुमार श्रेष्ठ
मुलुक संघियताको संरचनामा गएसंगै नवलपरासी जिल्ला पुर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरि दुई जिल्लामा बिभाजन भयो । नयाँ जिल्ला भएपछि सदरमुकामका लागि आवश्यक भौतीक संरचना र अन्य व्यवस्थापनवारे नवलपुरमा धेरै पटक धेरै ठाउँमा बहस र छलफलहरु भए । लामो समयको रस्साकस्सी पछि कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको खाली जग्गामा एकिकृत नमुना सदरमुकाम बनाउने गरि सहमती भयो । सोहि वडाको वडा अध्यक्ष भएको नाताले पनि म आफु पनि जग्गा प्राप्तिको अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको थिए ।
एकिकृत नमुना सदरमुकामको डिपिआर समेत तयार नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बि.स. २०७६ सालको बैशाखमा निकै तामाझामका साथ यस परियोजनाको सिलान्यास समेत गर्नुभयो । सत्तारुढ दलका सांसद देखि नेता कार्यकर्ता समेतले यसलाइ निकै प्रचार प्रसार गरें , सदरमुकाम बनाउने कार्यको जस लिन हानथापनै देखियो । सामाजिक संजालहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिलान्यास गरेको फोटोलाई निकै लामो समय सम्म प्रचार प्रसार पनि गरियो । तर सिलान्यास भएको २ बर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि डिपिआर तयार गर्ने बाहेक अन्य काम कुनै पनि काम भएको छैन ।
डिपिआरका अनुसार एकिकृत नमुना सदर मुकाम बनाउन १५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्छ भनिएको छ । तर हरेक बर्ष सरकारले अति न्युन बजेट छुट्टाएर यो परियोजनाको खिल्ली उडाएको छ । यहि तरिकाले अघि बढ्दै जाने हो भने निकै महत्वकांक्षी मानिएको यो परियोजना सम्पन्न गर्न निकै सकस देखिन्छ । राष्ट्रीय गौरवका र महत्वाकांक्षी आयोजना सम्पन्न हुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको गृह जिल्ला नै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हरुबाट छर्लङ्ग बुझिन्छ । नवलपुरको एकिकृत नमुना सदरमुकामको काम सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा अब जति लुकाउन खोजेपनि जनताबाट लुक्ने बिषय रहेन । जति टालो हालेर छोपछाप गर्न खोजेपनि भ्वाङ्ग टाल्न जिल्लाका सत्तारुढ दलका सांसद , नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सकस भएको छ ।
सदरमुकाम निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा हामी नवलपुरवासीहरुलाई सदरमुकाम निर्माणको कुरा कागजी मात्रै रहेछ र यो चुनावी फण्डा मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न अब गा¥हो छैन । नमुना सदरमुकामको शिलान्यास पश्चातका बजेट वक्तव्यमा सदरमुकाम निर्माणका लागि बजेट बिनियोजनका कागजी कुराहरु चर्चामा आएपनि त्यसले मूर्तरुप लिन नसक्दा हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि पनि र अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा नमुना सदरमुकाम निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने गरि गरेको सम्बोधनले हामी जिल्लाबासी हर्षितनै छौं , तर यसको कार्यान्न्वयनको पाटोमा भने शंका गर्ने प्रसस्त आधारहरु देखिन्छन् । योजना महत्वाकांक्षी नै हो , संघिय सरकारले यसमा वेवास्ता गरेको कुरालाइृ अब लुकाएर लुक्दैन । नवलपुरबाट निर्वाचित सत्तारुढ दलका सांसद प्रधानमन्त्रीका निकट छन् त्यसकारण पनि यो योजना पुरा गर्न कठिनाई छैन भनेर प्रचार पनि गरियो । तर प्रधानमन्त्रीको निकट हुँदैमा हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा पछिल्ला दुई बर्षले प्रमाणीत गरेका छैनन् र ?
एकिकृत नमुना सदरमुकामको काम सुरु होस् भन्ने चाहाना सबैको छ तर पनि यस सम्बन्धी कामहरु जति सबै कागजमानै सिमित हुनु जिल्लावासीको लागि दुखको कुरा हो । अहिले बिभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका कार्यालयहरुका कारण सेवा लिन सर्बसाधारणलाई असहज भईरहेको बेला एकिकृत नमुना सदरमुकामको काम सुरु होस् भनेर चाहाना राख्नु जनताको अधिकारकै कुरा हो । के यसो भन्दैमा एकिकृत नमुना सदरमुकाम बनाउने हाम्रो चाहाना अधुरै रहने भन्ने प्रश्न आउँला , के यो असंभव छ भन्ने कुरा पनि आउँला तर त्यस्तो हैन । अब केन्द्रीकृत भएर भन्दा विकेन्द्रीत भएर भवनहरु बनाउन थालियो भने बरु नतिजा छिटो हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुको भवन निर्माणका लागि भनेर मन्त्रालय बिभागबाट हरेक बर्ष बजेट छुट्टाईएको छ , तर परिपक्व योजना , भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल र अनुमती नपाउँदा त्यस्तो बजेट फर्ता गएको उदाहरुण छन् । यसो हुँदा एकातिर सरकारी कार्यालयहरुका भवन बन्न सकेका छैनन् भने अर्को तिर नमुना सदरमुकामको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । तसर्थ मुख्य समस्या कुन कार्यालयलाइ कहाँनेर कति र कुन जग्गा हो भन्ने कुराको निक्र्यौल पहिले हुन जरुरी छ । जग्गाको प्रष्ट बाँडफाँड भएपछि उनिहरुलाइ डिपिआर अनुसार फरक नपर्ने गरि भवन बनाउन दिईयो भने बरु छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो होला । सरकारबाट एकमुष्ठ रकमको आश गरेर बसियो भने दशकौ सम्म पनि भवनहरु बन्दैनन् । अर्को कुरा यदि अहिले तयार गरिएको डिपिआर अनुसार यो योजना निकै महत्वाकांक्षी हो र पुरा गर्नका लागि कठिनाइ हो भने यसको समिक्षा गरौं र सहज कसरी हुने हो त्यता तर्फ अघि बढौं । यसो गरेमा मात्रै नमुना सदरमुकाम निर्माणको नारा कागजी रुपमा मात्रै सिमित नभइ निर्माण कार्यले समेत गति लिनेछ अन्यथा नमुना सदरमुकाम निर्माणको सपनाले बिगतका वर्षहरुकै नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ तसर्थ यसतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याएर निर्माण कार्यलाई मूर्त रुप दिन तर्फ लाग्नु नै नमुना सदरमुकाम निर्माणको असली अभियान हुनेछ । यसका लागि सबै राजनितिक दल र सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अब विकल्प सोच्न तिर लाग्न आवश्यक छ । होईन भने सदरमुकामको निर्माणको कुरा कागजी सपनामा मात्र सिमित हुनेछन् ।
( लेखक श्रेष्ठ कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष हुन् । )
प्रकाशित मिति: बुधवार, असार १६, २०७८, ०४:२६:००
काँग्रेस महाधिवेशन : कस्तो नेता चुन्ने ?
आइसोलेसन बाट संचारकर्म : एउटा गज्जवको अनुभव !
'देउवा ,भाग्यमानी त भए अब सक्षम बनुन्'